Västra Götaland waa gobol taajir ka ah duwaanshaha badan. Halkaan waxaa ku yaalo dhulalka beeraha, jiqyaal, wabiyaal, magaalo weeyn oo leh meelo dadka ku yaryihiin oo si teel teel ah uu daganyihiin. Sido kale waxaa jiro jasiradooyin badan oo ku yaalo dhanka galbeed ee gobolka. Waxaa jiro 49 degmo, waxaana dagan 1,6 malyoon qof oo ku nool Västra Götaland. 600 000 oo ka mid ah intaas waxeey ku nool yihiin goobaha-Göteborg.
Guri yari ayaa ka jirto ku dhawaad degmooyinka gobolada dhamaantood. Waxaa jiro qorsho loo lee yahay in lagu dhiso guriyaal cusub oo badan laakin ma uu dhismooyaan sidii uu safka uu dheeraanaayo oo kale. Sidaas darteed waqti dheer ayee qaadan kartaa in la helo nuuca guriga la rabo hadana dad badan qarkood waa in ee guriyaal ku meel gaar ah dagan. Guriyaal laga kireeysto Göteborg iyo hareeraheeda.
Gobolka Västra Götaland waa shiqo dhiibaha ugu weeyn gobolka. Halkaan waxaa ka shaqeeyo oo ka mid ah dadka ka shaqeeyo arimaha daryeelka caafimaadka iyo bukaanka, shirkadaha, dhaqanka iyo bey'adda. Sido kale gobolka Västra Götaland ayaa ka masu'uul ah isgaarsiinta guud iyo dalxiiska. In dheeraad ah oo ku saabsan isgaarsiinta guud ka akhriso bogga Västtrafik, in kale ka oo ku saabsan dalxiiso ka akhriso bogga Västsverige. Magaalada Göteborg waxeey lee dahay shaqaale badan oo waxaa ka mid ah kuwo ka shaqeeyo iskuulada, xanaaneeynta iyo maamulka. Shaqo dhiibayaasha madaxabanaan waxaa ugu weeyn Volvo Personvagnar AB oo meelo badan oo kale duwan gobolka wax ku soo saarto.
Jaamacadooyin badan ayaa ku yaalo Västra Götaland. Jaamacada Göteborg, oo ah mida gobolka ugu weeyn, waxeey lee dahay 37 000 oo arday iyo ku dhawaad 6000 oo shaqaale. Sido kale Göteborg waxaa ku taalo Jaamacada Chalmers oo leh waxbarasho farsamo oo kala duwan. Tusaale ahaan Borås waxaa ka jirto waxbarasho aqoonta-macluumaadka iyo dhar-sameeynta. Skövde waxaa jirto oo ka mid ah waxbarashada ku jiheeysan hormarinta cayaaraha kombiyuutarka iyo kalkaalisnimo. Trollhättan jaamacadeeda waxeey ku jiheeysan tahay in badan oo ka mid ah waxbarashada qeeyb ahaan lagu sameeyo goob-shaqo ee kala duwan.
Haddii aad qabto cudurada caadiga, dhaawacyo ama xanun waxaad tageeysa rugta caafimaadka ee xaafadeedka. Sido kale halkaan waxaad ka heli kartaa taagero iyo caawinaad ku socoto in aad caafimaadkaada fiicneeysid. Kaalmod fiican oo leh luuqado kala duwan. Västra Götaland waxaa ku taalo 18 isbitaalo oo leh takhasuska daryeelka caafimaadka. Haddii aad si degdeg ah uu xanuunsato wac 112. Sido kale daryeelka ilkaha caaawimaado oo luuqado kala duwan ayaa ku heli kartaa.
Habab kala duwan ayaa dhaqanka looga raaci karaa Västra Götaland. Halkaan waxaa ka jiro oo ka mid ah riwaayado badan, koox-heeso, mutxafyaal iyo maktabadooyin si fiican loo soo booqdo. Maktabada buugaag ayaa ugu amaahan kartaa si balaash ah. Dadka gobolka, iyo Iswiidhan oo dhan, waxeey xiligooda firaqadeed inta badana ka hoowl galaan urur. Ku jirada urur shaqaalo, ama urur isboorti ama urur guri waa mid caad iah. Dadka dhamaantood waa ku soo dhaw yihiin in si xur ah uu joogaan dabiicada, jiqda, bada agteed ama wabi agtiis. Xuquuqda tamashaleeynta ayaa ka warameeyso waxaa dabiicada laga ogalyahay.
Gobolka Västra Götaland waxaa ku yaalo in badan oo kala ah ururo, kaniisado iyo ururo diimeed oo si firfircoon ka shaqeeyo arimaha qaxootiga iyo isdhexgalka. Waxeey kala wadaan hoowlo badan oo kala duwan si dadka dhamaantood meesha ugu nagaadaan hadana dareemaan in ee ka mid yihiin bulshada Iswiidhan. Tusaale ahaan waxeey habeeyaan goobo kulan, biibto-luuqadeed, waxbarashada iswiidhishka, caawimaada layliga iyo hoowlo isboorti, dhaqaamed iyo howlaha xilliga firaaqada. Qarkood waxeey soo bandhigaan talobixin caafimaad iyo sharci.
Ururada qarkood ee ka jiro gobolka waxaad ka heli kartaa bilabaadka soo bandhiga ka hooseeyo qodobka Ururada. Sido kale waxaa liisyaal ka heli kartaa bogga machadka soo galooytiga. Boggayada degmooyinkana waxaa ku jiro oo kale diiwaan-urureed oo aad ka arki karto ururada ka firfircoon degmo kasto.
PIZZABAGRE / KÖKS - / RESTAURANGBITRÄDE Köksbiträde
Specialkock inom kinesisk kök sökes! Specialkock
Är du stans nästa vassa Barberare? Herrfrisör
Innesäljare / ordermottagare Kundtjänstmedarbetare
Innesäljare / ordermottagare Ordermottagare
Utbildningshandläggare , utbildning på forskarnivå Utbildningshandläggare
Lärare i förskola / Förskollärare Lärare i förskola/Förskollärare
Senior Lecturer in clinical nutrition Universitets- och högskolelektor
Receptionist Läkarsekreterare/Vårdadmin/Medicinsk sekreterare
Undersköterska som vill ingå i vårt starka team sökes! Undersköterska, vård- o specialavd. o mottagning
Kronan 4 - 6 söker Lärare Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Vi söker personal till Canal Digitals kundtjänst , start 16 / 7 Kundtjänstmedarbetare
Musiklärare 40% och ev elevass 60% Hovhultsskolan Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Business Analyst till Fordonsindustrin Finansanalytiker
Customer service representative till livsmedelsföretag Kundtjänstmedarbetare
Biträdande forskare Molekylärbiolog
Lärare i Franska åk 9 Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Sjuksköterska till Hemsjukvård Centrum Sjuksköterska, grundutbildad
Bogga 1 ee ka mid ah 386